Uhlobo-c PD Charger
USB Micro Pregnancy
Amaxabiso ethu ziphantsi utshintsho ngokuxhomekeke unikezelo kunye neminye imiba emarikeni. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kwakho qhagamshelana nathi xa ufuna ulwazi olongeziweyo.
Ingaba unayo wobungakanani ukuze?
Ewe, siya kufuna ukuba zonke ii-odolo ngamazwe ukuba okoko ubuncinane order nobungakanani. Xa ngaba ukhangela ukuba angathengisa kodwa ngamanani amancinci kakhulu, sicebisa ukhangela iwebsite yethu
Kuba iisampuli, ixesha yipeyinti malunga iintsuku ezisi-7. Kuba production mass, ixesha phambili ziintsuku 20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo kusebenza xa (1) siye safumana idipozithi yakho, kwaye (2) sinayo imvume yakho yokugqibela imveliso yakho. Ukuba maxesha ethu phambili azisebenzi nge umhla yakho, nceda uye phezu iimfuno zakho ukuthengisa yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukubonelela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi akwazi ukwenza loo nto.
Thina iwaranti izinto zethu nokusetyenzwa. Ukuzinikela kwethu ukuba ukwaneliseka kwakho iimveliso zethu. Xa iwaranti okanye akunjalo, oko inkcubeko yenkampani yethu kwidilesi nokusombulula yonke imiba nabaxhamli lokwaneliseka wonke
Ewe, sisoloko ukusebenzisa kwizinga eliphezulu kumazwe ukuphakheja. Kwakhona sisebenzisa ezizodwa nokupakisha ingozi yeempahla ezinobungozi asemthethweni keli yokugcina abandayo lobushushu izinto eziyimfihlo. zokubopha zeengcali kunye neemfuno ivale non-esezantsi kungaba kukho intlawulo eyongezelelweyo.
Iindleko lokuthumela kuxhomekeka kwindlela okhetha ukufumana impahla. Express ngokwesiqhelo eyeyona ngokukhawuleza kakhulu kodwa ndlela kuyabiza. Yi seafreight sesona sisombululo kakhulu imali enkulu. Ngqo amazinga zezomoya singakwazi kukunika kuphela xa siyazi iinkcukacha mali, ubunzima kunye nendlela. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana ingcaciso engaphezulu.
Ukuba umsebenzi TO WITH US?
Idilesi: YONGEZA: ummandla 3f / 701 Room Peng Hua xiangyu emyezweni xin qu da dao Long hua Shenzhen China 518000
T Mobile Wireless Charger, Mobile Phone Charger, Mobile Phone Car Charger, Car Charger, Double Usb Car Charger, Magnetic Cell Phone Charger,